Volkano Gunung Batur, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Ny volkano Mau Batur
Volkano Gunung Batur
Topimaso ny volkano Gunung Batur
Haavo - 1717m.
Volkano - mihetsika (ny fipoahana farany tamin'ny 2000)
Voloky volkano - caldera
Fiakarana - adiny 2 eo ho eo
Tarigetra malaza - fihaonana amin'ny maraina
Volkano Bali iray hafa miasa ity. Ny hotely dia miorina amin'ny faritr'i Kintamani atsinanan'i Bali. Manana haavo 1 717 m izy.
Amin'ny ankapobeny, ny anarana Gunung Batur dia ampiasaina mifandraika amin'ny faritra iray manontolo, ny velarany dia 368 metatra toradroa. km. Io faritra io dia mandrakotra ny volkano, ny farihy eo akaikiny (antsoina koa hoe Batur) ary tanàna maro. Ahitana crater 3 ny volkano. Ny velarantanin'ny roa amin'izy ireo dia manodidina ny 182 metatra toradroa. m, ny velaran'ilay fahatelo - 000 sq. M.
Fiakarana mankany Batur
Hiakatra any an-tampon'ny Batur, tsy mila fanomanana. Ny fiakarana tsy maharitra roa ora, ary iharan'ny fijanonana roa mandritra ny fiakarana izany. Ny antony lehibe manosika ny mpizahatany hianika ny Gunung Batur dia ny fahitana ny maraina. Ny fihaonana amin'ny fiposahan'ny masoandro eo an-tampon'ny tampon'isa dia tsy vitan'ny hoe mahazo fihetseham-po mahery fotsiny, fa koa maka sary manaitra.
Fa na izany aza, ilaina ny mpitarika amin'ny fampiakarana. Afaka mahita mpitari-dalana amin'ny tongotra ianao, azo atao koa ny manafatra mialoha ny fitsangatsanganana. Amin'ireo tranga roa ireo, ny mpitari-dalana dia ny mponina any Bali miteny anglisy. Ny fiakarana an'ity volkano ity irery dia tsy mampidi-doza, fa voararan'ny lalàna eo an-toerana ihany koa. Rehefa dinihina tokoa, maro ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny fiezahana tsy miankina hianika an'i Batur.
Làlana maromaro no mankany amin'ny tampony. Izy rehetra dia manomboka any amin'ireo tanàna kely akaikin'ny faran'ny volkano. Ny làlan-kaleha lehibe dia mankany amin'ny lemaka atsimo. Betsaka ny toerana fialamboly ao.
Ny fotoana mety indrindra hanombohana ny fiakarana dia amin'ny 3 maraina. Amin'ity tranga ity, dia tena hanana fotoana hahatongavana eo an-tampony ianao, hipetraka eo ambonin'ny tokotanin-tsambo ary hankafy ny maraina, manomboka amin'ny tara-pahazavana voalohany.
Ny vidin'ny fitsangatsanganana (fiakarana) mankany Batur dia avy amin'ny $ 25 ka hatramin'ny $ 75, miankina amin'ny haben'ny vondrona sy ny firafitry ny fitsangatsanganana. Ny vidiny dia mety misy famindrana mankany amin'ny volkano, serivisy mpitari-dalana, sakafo maraina ary fitsidihana ireo loharano mafana. Fa izany rehetra izany dia tsy maintsy ekena mialoha.
adiresy: Batur Sel., Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali
Tapakila fidirana - $ 25 - $ 75
Sarin'ny volkano Batur
Volkano Gunung Batur. Fihaonana ny maraina
Loharano mafana eo akaikin'ny volkano Batur (Lohataona mafana voajanahary Batur)
Ny fiposahan'ny masoandro tao amin'ny Volkano Gunung Batur
Volkano Batur amin'ny sarintany